Wasiir saddexaad ayaa ka warhayey fadeexaddii IT:ga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ann Linde wasiirka EU iyo ganacsiga ayaa ah wasiirkii saddixaad ee ka warhayey fadeexaddii IT:ga. sawir: Janerik Henriksson/TT
Wasiir saddexaad ayaa ka warhayey fadeexaddii IT:ga
Fadeexaddii IT:ga oo weli sii socota.
La daabacay fredag 4 augusti 2017 kl 11.56
Fadeexaddii IT:ga ee hay'adda gaadiidka ayaa siibalaadhanaysa, iyada oo hada la ogaaday in wasiir saddexaad uu ka warhayey fadeexadan mudo badan ka hor markii rasaylwasaaraha lagu wargeliyey.
Wasiirka xiriirka EU-da iyo arrimaha ganacsiga Ann Linde oo markii fadeexadan bilaamatay ahayd xoghayahii wasiirkii iscasilay ee arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa la sheegtay in ay goor hore ka warheshay heshiiskii ay wada galeen hay'adda gaadiidka iyo shirked gaar loo leeyahay. Arrintan oo keentay fadeexadda labo wasiir ay iskaga casileen xukumada.
Laanta wararka ee raadiyaha Sweden ayaa sheegtay in laanta sirdoonka iyo amaanka ee Säpo ay ku wargelisay Ann Linde in Säpo ay aad uga cabsanayaan in macluumaad xasaasi ahi gacanta uu u galo dad aan ku haboonayn. Sidoo kale waxa la sheegay in Säpo ka wargaysay in hogaamiyihii guud ee hay'adda gaadiidku ay sharciga baal martay xilligaas, in kasta oo Säpo u digtay. Warkan ayaa Ann Linde soo gaadhay bishii sebteember ee 2015, mudaas oo ah saddix bilood ka hor xilligii la saxeexay heshiiskii dhaliyey fadeexaddii IT:ga ee gilgishay xukumada.
Balse Ann linde oo hada ah wasiirka EU iyo ganacsiga ayaa sheegtay in ay ka warhaysay fadeexadan balse ku dooday in ay sameeysay wixii loo bahaanaa in la sameeyo si looga hortago dhaawac ka yimaada fadeexadan. Waxay sheegtay Linde in ay masuuliyiinta ku lug lahaa maareeynta dhacdadan ku wargelisay.
Rasaylwasaaraha oo warqad u qoray wakaalada wararka ee TT ayaa sheegay in ay si dhakhso ah u bilaamayo baadhitaan lagu sameeynayo fadeexadan, markaas ka dibna uu soo bandhigi doono talaabooyinka uu qaadi doono.
Dhinaca kale hogaamiyaha guud ee loo magacaabay hay'adda gaadiidka Jonas Bjelfvenstam ayaa sheegay in uu bilaabaayo in dib loogu soo celiyo hay'adda gaadiidka dhammaan macluumaadkii lagu wareejiyey shirkada heshiiska la gashay hay'addan.
- Weli waxan haysanaa farsamayaqaano ka shaqeeya socodsiinta war-isgaadhiinta macluumaadka lagu keeydinayo. Dadkan oo aan ahayn qaar baadhista amaan lagu sameeyey. Balse ma arki karaan macluumaadka ku jira war-iskaadhsiinta. Keliya waxay ka shaqeeynaayaan in war-isgaadhsiintu ay shaqaynayso. Sida ugu dhakhsaha badan ayaan u keeni doonaa shaqaale baadhis amaan lagu sameeyey oo shaqadan qabta isla markaana iswiidhish ah. Balse marka hore waa in la helo dad xirfadan qaban kara, sidoo kalena la mariyo baadhista dhanka amaanka ah, ayuu yidhi Jonas Bjelfvenstam